किर्तिमानी गीतकार डिआरको छक्कै परेंमा आस्मा र सरोज - दैनिक नेपाल न्युज
शनिबार, साउन ३१, २०७७ | Saturday 15th August 2020
काठमाडौं, १४ साउन गीत लेखेरै गिनिज अफ वल्र्ड रेकर्डमा आफ्नो नाम लेखाईसकेका गीतकार डा. डिआर उपाध्यायले आफ्नो नयाँ गीत छक्कै परें…को भिडियो बुधबार दर्शकमाझ ल्याएका छन् । यो गीत बिष्णु भट्ट र बिना भट्टराईको स्वरमा रहेको छ । जसमा बिष्णु भट्टकै संगीत छ । गीतकार उपाध्यायले यसपटक आफ्ना यो गीतको भिडियोमा निकै मेहनत गराएका छन् ।
गीत लेखेर नै गिनिज अफ वल्र्ड सहित विश्वका १५ वटा विश्व रेकर्ड बनाएका उपाध्ययको बिगतको गीतको भिडियो भन्दा यो भिडियो केही पृथक बनेको छ । गीतको भिडियोमा कार्टुन क्रुका जोडी सरोज अधिकारी र आश्मा विश्वकर्माको आकर्षक नृत्य छ । डान्सिङ जनराको यो गीतमा यी दुई जोडीले विभिन्न नृत्य कलाकारका साथ उर्जायुक्त डान्स प्रस्तुत गरेका छन् ।
ठेट नेपाली शब्दहरुको प्रयोग गरिएको गीत रोमाञ्चक बनेको छ । यो भिडियोलाई माईकल स्टेप अप एन्ड आर्टस् एकेडेमीका सञ्चालक कोरियोग्राफर माईकल चन्दले निर्देशन गरेका छन् । उनले गीतमा सरोज र आस्मालाई नृत्यको फरक फरक स्टेपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उत्सब दाहालले खिचेको यो भिडियोमा सिलन लम्सालको सम्पादन छ । यो गीतको भिडियोलाई डिआर म्युजिक एन्ड क्रियसनको युट्युव च्यानलबाट रिलिज गरिएको छ ।
यति सुन्दर बच्चालाई यसरी कपनको झाडीमा फाल्ने को होलीन् ति आमा ? (भिडियो हेर्नुहोस)
शरीरमा यस्तो परिवर्तन देखिए हुनसक्छ ब्रेन ट्युमर
काठमाडौँ - भाबसागर ईन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानलको पाँचौ एनिभर्सरिको उपलक्ष्यमा बरिष्ट गीतकार अम्बिका गुरुङको शब्द तथा गायक संगीतकार शंकर थापा स्माइलले स्वरबद्ध गरेको राष्ट्रिय गित 'बिर गोर्खाली' सार्बजनिक भएको छ। बरिष्ट [...]
चर्चित गायिका प्रिती आलेको स्वरमा “फरीया उचाली” सार्वजनिक
हिन्दु नारिहरुको महान चाड हरितालिका तिजको अवसर पारेर तीज गीत सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ यसै क्रममा तिज गीतमा व्यस्त तथा चर्चित गायिका प्रिती आले, शंकर घिमिरे र सृजना श्रेष्ठको [...]
शर्मिला गुरुङ्गको स्वरमा रहेको तीज गीत “दमीनी” मा बिष्णु भट्टराईको प्रशंसनीय निर्देशन
नेपाली नारिहरुको महान पर्व हरितालिका तिज नजिकिदै गर्दा नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय गायक र गायिका र सर्जक हरुलाइ निकै ब्यस्त देखिन्छन् । तीज आउनै लाग्दा कलाकार हरुले आफ्नो तिज कोशेली [...]
साउन महिना झारी पर्ने समय,मनसुन को मौसम तर त्यो दिन पानी परेको थिएन । सायद भगवानलाई पनि यि बच्चीलाई जिवित नै हेर्न मन थियो,हो हिजो मात्र कपनको त्यो झाडीमा बिस्कुटको [...]
अक्षय कुमारको सबैलाई चकित पार्ने बंगला, आलिसान बंगलामा पत्निले गर्छिन् यस्तो काम
एजेन्सी । बलिउडमा एकपछि अर्को सफल फिल्म दिइरहेका खेलाडी कुमार अर्थात् अक्षय कुमार आफ्नो कैरियरकै सफलताको उच्च बिन्दुमा रहेका छन् । उनले अभिनय गरेका पछिल्ला सबै फिल्मले बलिउड बक्स अफिसमा [...]
मुटुबाट रक्तसञ्चार हुने बेलामा रक्तनली ९आर्टरी० को भित्तामा पर्ने दबाबलाई रक्तचाप भनिन्छ । रक्तचापलाई ‘मिलिमिटर अफ मर्करी’मा नापिन्छ । माथिको रक्तचापलाई ‘सिस्टोलिक’ र तलको रक्तचापलाई ‘डायस्टोलिक’ भनिन्छ । ‘सिस्टोलिक’ र [...]
अमेरिकामा एकैदिन १ हजार ५९२ को मृत्यु